ရန်ကုန်မြို့ ကို တိုးချဲ့ရာတွင် မြေမာသည့် ဘက်ချဲ့ထွင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ မြေငလျင်ကော်မတီ အြ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့ ကို တိုးချဲ့ရာတွင် မြေမာသည့် ဘက်ချဲ့ထွင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ မြေငလျင်ကော်မတီ အြ?
ရန်ကုန် မြို့ကိုချဲ့ထွင်ရာတွင် မြေပျော့သည့်နေရာများသည် ငလျင်ဒဏ်ပိုမိုခံရနိုင်ခြေရှိသည့်အတွက် မြေမာသည့်ဘက်ကိုချဲ့ထွင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမြေငလျင်ကော်မတီမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောထွေးဇော်က ပြောကြားလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ စင်ထရယ်ဟိုတယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းက ဦးစီးကျင်းပသည့် မီဒီယာများအတွက်ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင် ရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲအ ခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးစောထွေးဇော်က” ရန်ကုန်အနေနဲ့ပြောရရင် ရန်ကုန်ရဲ့အ ရှေ့ဘက်ကစစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ရှိပါတယ်။ ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ်က ပဲခူးငလျင်လှုပ်တဲ့အခါမှာ ရန်ကုန်မှာလူငါး ဆယ်လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်။ အ ဆောက်အအုံအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်။ အခုတူညီတဲ့ငလျင်ပဲလာတယ်ထားဦး။ အထပ်မြင့်တွေပိုများလာပြီး၊ လူဦးရေပိုထူထပ်လာတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းက မြေမာတွေမှာဆောက်လို့ နေရာလွတ်မကျန် တော့လို့ မြေပျော့နေရာတွေမှာ အထပ်မြင့်တွေနဲ့မြို့ကို ချဲ့တာ တွေလုပ်မိရက်သား ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုတောင်မှ Plan လုပ် နေတဲ့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တို့၊ ဒလတို့၊ တွံတေးတို့ အဲဒီဘက်တွေကလည်း အင်မတန်ကိုမြေပျော့တဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံက မြို့ကိုချဲ့ မယ်ဆိုရင် အများကြီးစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ မြို့ကိုချဲ့မယ်ဆိုရင် တော့ မြေမာတဲ့ဘက်ကိုချဲ့စေချင် ပါတယ်။ မြေပျော့တဲ့ဘက်ကိုချဲ့ ရင် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေ ထိခိုက်နိုင်ဖို့ ပိုများပါတယ်။ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့မှ ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ် ပဲခူးငလျင်လှုပ်ခဲ့သည့် အချိန်က ပဲခူးမြို့တွင်လူငါးရာလောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်လူငါး ဆယ်လောက်သေဆုံးခဲ့ကာ အ ဆောက်အအုံများပျက်စီးခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါငလျင်လှုပ်ခဲ့သည်မှာ နှစ် ပေါင်းရှစ်ဆယ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တစ်ကျော့ပြန် ငလျင်များပြန်လည်လှုပ်ခတ်လာ နိုင်ခြေရှိကြောင်း မြေငလျင်ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားကြသည်။ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးဒေါ်ရီရီငြိမ်းက”စစ်ကိုင်းပြတ် ရွေ့ကလှုပ်ခဲ့ရင်ပေါ့။ Return Period နှစ်တစ်ရာအတွင်းမှာရှိတဲ့အတွက် အခုဆိုရင်ပဲခူးငလျင်ဆိုရင် ၁၉၃ဝ ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၈၈ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဆိုတော့ နှစ်တစ်ရာအတွင်းဆိုတဲ့အတွက် ကြောင့် နှစ်တစ်ရာပြည့်မှလှုပ် မယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီနှစ်တစ်ရာအတွင်းမှာ အချိန်မရွေးပြန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Hazard နဲ့ Risk ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရန်ကုန် Risk အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Non Enginner Building တွေရယ်၊ မြေအမျိုးအစား ရယ်ပေါ့။ Down Town ခြောက် မြို့နယ်က Soft Soild ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီနေရာတွေဟာအကုန်လုံး ရန်ကုန်မြစ်ရိုးတစ် လျှောက်ကနေ နုန်းတင်မြေနုတက် လာတဲ့ Soft Soild ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ အဲဒီတောက်လျှောက်မြို့ နယ်တွေက ငလျင်လှုပ်ရင်တော့အန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ်မှာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ကင်တပ်ကီပြည်နယ် အထက်တန်းကျောင်း၌ သေနတ်ပစ်မှုဖြစ်ပွား နှစ်ဦးသေဆုံး၊ ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ၊ တရား??
လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ကလေးမြို့နယ်၊ ရန်ကြီးအောင် ကျေးရွာ?
အရိပ်ရသစ်ပင်စိုက်ခဲ့သူ ဦးငွေအား ဂုဏ်ပြုစုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပွဲ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပ
ကမ္ဘာ့ဖလား ရှုံးကြွေးကို ဝင်ဘလေတွင်ပြန်ဆပ်မည်ဟု ဟန်ဒါဆင်ကြုံးဝါး၊ ဒဏ်ရာကြောင့် အင်္ဂလန်နှင့်?
ညီအစ်ကိုချင်း စကားများရာမှ စိတ်ဆိုးပြီး နေအိမ်အတွင်း အဝတ်အထည်များအား မီးရှို့ရာမှ နေအိမ် မ
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အပေါ် လူထုအမြင် သဘောထား ကောက်ခံသူများထဲမှ ဖမ်းဆီးခဲ့သူ နှစ်ဦးကို